Positano bụ a cliffside obodo na n'ebe ndịda Italy si Amalfi Coast. Dị ka akụkọ mgbe kere Neptune, Chineke nke oké osimiri nke na-adịghị n'anya maka nymph. Ya obere okwute beachfront na nkpoda, warara n'okporo ámá lined na ụlọ ahịa na cafes bụ ihe ọ bụ ma ama n'ihi na. Ị na nwunye gị kwesịrị ịga leta Chiesa di Santa Maria Assunta featuring a 13 na narị afọ Byzantine na akara ngosi nke Virgin Mary.
dị ka ịbanye n'ime nrọ, Positano bụ zuru okè n'ebe usọrọ ke ịhụnanya! E nwere ọtụtụ ihe ga-eme; ị na-n'aka na-enwe a njem nke a ndụ.
Mgbe ọ na-abịa na-achọta gị mma Honeymoon aga Europe, Hvar, Croatia bụ mgbe on di na nwunye anatara! Agha-idobe eke mara mma, obodo ochie mgbidi, na-acha anụnụ anụnụ na-adịghị agwụ agwụ nke Adriatic: Croatia bụ nhọrọ magburu onwe ya maka ezumike ezumike dị mkpụmkpụ ma ọ bụ obere ezumike ịhụnanya. Na ọtụtụ anyanwụ, ubi-vine, na ụlọ oriri na ọṅụṅụ nhọrọ, will ga-ahụ n'anya mgbe ị ga-aga njem mmanya na Europe na njem a dị ịtụnanya.
Nke a obere walled obodo jupụtara Gothic ije bụ zuru okè kwesịrị ekwesị maka ndị di na nwunye na-achọ vibes dị jụụ na obere akụkọ ihe mere eme na nlegharị anya n'ụbọchị. Mgbe gara bụ otu n'ime ụzọ kacha mma ịhụ Croatia n'ozuzu-ma mee ka ihu ya, also a great way to arrive on a honiimuunu-as nke ọnwa, Über ka eze rutere n'ógbè, ma-adịghị na otú i nwere ike na-eche.
Switzerland might not be the first place to come to mind when you think of Honeymoon Destinations In Europe, ma ọ bụ maa mma ịtụle. Ọ bụ ezie na obere ikwu kasị mba Europe, Switzerland nwere enwekwa eke mma. Ebe obodo nta, ọkaibe obodo, ihe nketa ọdịbendị bara ụba, na a pụtara backdrop gị honiimuunu ma ị gara na oyi, spring, n'oge okpomọkụ, ma ọ bụ ịda.
Italy bụ isi obodo bụ a obi ụtọ maka newlywed di na nwunye. ọ bụ otu n'ime ndị kasị gara na ndepụta nke honiimuunu aga Europe, Ọ bụ zuru okè na-enwe akpa ụbọchị ole na ole di na nwunye. si ya cobbled n'okporo ámá na iriba ama na ngosi ihe mgbe ochie, ekiri fim, na ihunanya ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ị ga-adịghị agwụ agwụ ahụmahụ na-enwe ọnụ.
Ị ga-eleta The Roman na-eme egwuregwu! Ha na-mara gafee ụwa maka ha ịdị ebube na ntị zuru ezu. Efu ekiri fim na a anya ka le. Mgbe ọ malitere ikwughachi na arụmọrụ nke ndị kasị mma opera nka, ahụmahụ bụ ike na-akọwa.